Nnwom 37 AKCB - Salmos 37 NVI-PT
1Nhaw wo ho, nnebɔneyɛfo nti;
mma wʼani mmmere wɔn a wɔyɛ bɔne;
2Wɔte sɛ sare, ɛrenkyɛ na ahyew,
wɔte sɛ dua amono, ɛrenkyɛ na awu.
Tena asase no so na ma wʼani nka asomdwoe adidibea hɔ.
4Ma wʼani nnye wɔ Awurade mu
na wama wo nea wo koma pɛ.
na fa wo ho to no so, na ɔno na ɔbɛyɛ:
6ɔbɛma wo treneeyɛ ahyerɛn sɛ adekyee,
na wʼatɛntrenee ayɛ sɛ owigyinae.
7Yɛ komm wɔ Awurade anim na tɔ wo bo ase twɛn no,
nhaw wo ho wɔ wɔn a asi wɔn yiye ho
efisɛ wɔnam bɔne akwan so.
8Mma wo bo mmfuw na gyae abufuwhyew;
nhaw wo ho, ekowie bɔne nko ara.
9Wobetwa nnebɔneyɛfo agu,
nanso wɔn a wɔn ani da Awurade so no
wobenya asase no adi so.
10Ɛrenkyɛ, nnebɔneyɛfo bɛyera.
Wɔbɛhwehwɛ wɔn, nanso wɔrenhu wɔn.
11Nanso ahobrɛasefo benya asase no adi so
na wɔanya asomdwoe mmoroso.
12Amumɔyɛfo bɔ pɔw bɔne tia atreneefo
13nanso Awurade serew amumɔyɛfo,
na onim sɛ wɔn nna abɛn.
14Amumɔyɛfo twe afoa
na wokuntun wɔn ta mu
sɛ wobekum ahiafo ne mmɔborɔfo,
sɛ wobekum wɔn a wɔn akwan teɛ.
15Nanso wɔn afoa bɛwowɔ wɔn ankasa koma mu,
na wɔn ta mu abubu.
16Kakra a atreneefo wɔ no som bo
sen amumɔyɛfo bebree ahonya;
17efisɛ amumɔyɛfo ahoɔden bɛsa
nanso Awurade bɛwowaw atreneefo.
na wɔn agyapade bɛtena hɔ daa.
19Ahohiahia bere mu wɔremmrɛ.
Ɔkɔm bere mu wobenya ama abu so.
20Nanso amumɔyɛfo bɛyera.
Awurade atamfo bɛyɛ sɛ nwura mu nhwiren;
wobetu ayera sɛ wusiw.
21Amumɔyɛfo pɛ bosea, na wontua,
nanso ɔtreneeni de ahummɔbɔ ma;
22Wɔn a Awurade ahyira wɔn no benya asase no adi so,
na wobetwa wɔn a ɔdome wɔn no agu.
ɔma nʼanammɔntu si pi.
24Sɛ ohintiw a ɔrenhwe ase,
efisɛ Awurade kura no wɔ ne nsam.
25Na meyɛ aberante, na mprempren mabɔ akwakoraa,
na minhuu ɔtreneeni a Awurade apa nʼakyi
anaasɛ ne mma resrɛ aduan.
26Bere biara ɔyɛ adɔe, na ɔde fɛm kwa;
na ne mma benya nhyira.
27Twe wo ho fi bɔne ho na yɛ papa
28Efisɛ, Awurade pɛ nea ɛteɛ,
na ɔrennyaw ne nkurɔfo anokwafo no.
Wobenya bammɔ daa nyinaa.
Nanso amumɔyɛfo asefo de, wobetwa wɔn agu.
29Atreneefo benya asase no adi so
30Ɔtreneeni ano ka nyansasɛm,
na ne tɛkrɛma ka nea ɛteɛ.
31Ne Nyankopɔn mmara wɔ ne koma mu;
wɔn anan nwatiri.
32Amumɔyɛfo tetɛw atreneefo
hwehwɛ sɛ wobekum wɔn,
33nanso Awurade nnyaa wɔn mma wɔn,
na ɔremma wommu wɔn kumfɔ wɔ asennii.
sɛ wotwitwa amumɔyɛfo no gu a, mubehu.
35Mahu omumɔyɛfo a ɔyɛ basabasa
sɛ ɔredi yiye sɛ dua amono a esi asase pa so,
36nanso ankyɛ na nʼawiei bae a wonhu no bio;
mehwehwɛɛ no, nanso manhu no.
37Susuw nea ɔyɛ pɛ ho, na hwɛ nea ɔteɛ;
na asomdwoe nipa benya asetena pa daakye.
38Nanso wɔbɛsɛe nnebɔneyɛfo nyinaa;
na wɔbɛtɔre wɔn asefo ase.
39Atreneefo nkwagye fi Awurade
ɔne wɔn aban wɔ amanehunu bere mu.
40Awurade boa wɔn na ogye wɔn;
oyi wɔn fi amumɔyɛfo nsam, na ogye wɔn nkwa,
efisɛ wohintaw wɔ ne mu.
AKCB : Nnwom 37